नारायणी नदीले ब’गायो के’टो,के हुँदछ यस्तो? पूरा हेर्नुहोस। – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
नारायणी नदीले ब’गायो के’टो,के हुँदछ यस्तो? पूरा हेर्नुहोस।
रासस नवलपुर । नारायणी नदीमा आएको बा’ढीले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट गैँडाको बच्चा (केटो) ब’गाएको छ । निकुञ्जको दूर्गम क्षेत्र मानिने नवलपरासी (ब’र्दघाट–सुस्तापूर्व)को मध्यविन्दु नगरपालिका र वि’नयीत्रिवणी गाउँपालिकाको सिमाना भे’लौजीबाट नदीले केटोलाई ब’गाएको हो ।
निकुञ्जका सहायक सूचना अधिकारी लोकेन्द्र अधिकारीका अनुसार आज बिहान करिब तीन वर्षको केटोलाई नदीले ब’गाएको हो । “निकुञ्जको दूर्गम क्षेत्रबाट (को’र एरिया) आज बिहान गैँडाकोट बच्चालाई ब’गाएको छ” उनले भने, “केटोलाई ब’गाएपछि हामीले उ’द्धार गर्न अथक प्र’यास ग¥यौँ तर सफलता मिलेन सकेनौँ ।”
नदीको बाढीले केटोलाई ब’गाएर भारत पु¥याएको उनले जानकारी दिए ।केटोलाई भारत पु¥याएपछि वाल्मीकि टा’इगर रि’जर्वका पदाधिकारीसँग स’मन्वय गरेर केटोको खोजी कार्य जा’री राखिएको उनको भनाइ छ ।
“अहिलेसम्म केटोको अवस्था जानकारी पाउन सकिएको छैन” उनले भने, “केटो भेटिएपछि खबर गर्न भनेका छौँ ।” यस आर्थिक वर्षमा यस अघि आएको बा’ढीले ब’गाउँदा एउटा गैँडाको बच्चा मृ’तावस्थामा फे’ला परेको थियो ।
विसं २०७४ सालको साउनमा आएको बा’ढीमा ब’गेर निकुञ्जका गैँडा त्रिवेणीदेखि दक्षिण पश्चिमको भारतीय क्षेत्र पुगेका थिए । निकुञ्जले यसरी ब’गेका र ज्यूँ’दै रहेका १३ वटा गैँडा उ’द्धार गरेर चितवन नै ल्याएको थियो ।
Next डा. गोविन्द केसीको सम`र्थनमा दमौलीका दुई युवा बसे अन`शन , पूरा पढी शेयर गर्नुहोस् ।